Mac-kabashada Email: Sidee inuu ka soo kabsado Email tirtiray on Mac
> Resource > Mac > Mac-kabashada Email: Sidee inuu ka soo kabsado Email tirtiray on Mac
Ma Mac Recovery Email suurtogalka ah?
Aan u isticmaalo Mac OS X, oo aan u isticmaali Apple Mail on my Mac. Shalay waxaan la soo reynaya aan Apple Mail box iyo waxaan si qalad ah la tirtiro qaar ka mid ah mails socda qiimo leh, oo aan ku mail aan box Gmail aad. Sidee ayaan dib ugu heli karaa oo dhan aan mails?
Apple lada waa qalab ku haboon isticmaalayaasha Mac si ay u maareeyaan emails, iyo tirtirka shil ah ee mail Apple waxay keentaa dhib. Maxaa ka xun yahay in mararka qaar xitaa Dhawa ka heli kartaa emails lumay ka mail Apple "tirtiray fariimaha" tab, Mac qashinka ama xataa account mail aad internet-ka. Si kastaba ha ahaatee, aad emails Mac lumay lagu suurto gal badbaadiyey karaa inta ay tahay in aan la overwritten by files oo cusub ku Mac.
Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij la yaab leh Mac-kabashada email, ay taageerto dib u soo kabashada oo qaabab email sida PST, DBX, EMLX, EML oo MSG. Inta aad tallaabo qaado si degdeg ah, waxaad si fudud u soo ceshano kartaa emails lumay ay sabab u tahay tirtirka shil ah, Apple mail casriyeyn ama mail musuqmaasuqa.
Akhri hagahan soo socda si ay u qabtaan Mac kharribeen kabashada email ama Mac tirtiray kabashada email hadda. Haddii aad tahay Windows computer user, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa Wondershare Data Recovery for Windows oo akhri Windows kabashada email tutorial halkan: sida inuu ka soo kabsado emails lumay on computer Windows .
3 Talaabada inay Qabtaan Mac Recovery Email
Tallaabada 1 Dooro Recovery Mode inay bilow Recovery Email on Mac
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya Wondershare Data Recovery for Mac aad Mac, aad arki doonaa interface bilow waxay bixisaa qaab: "lumay Recovery File", "ceeriin Recovery", "Recovery Barzakh", "iPhone Data Recovery for iTunes" iyo "furmaya Recovery".
Halkan inuu ka soo kabsado emails lumay on Mac, aynu dooro "lumay Recovery File" hore. Haddii aad email lumeen ay sabab u tahay formatting, waxa kale oo aad isku dayi kartaa "ceeriin Recovery".
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab in emails aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Scan Barzakh Xagee Emails Your lumeen From
Hadda kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan Risaalo halka aad u socoto si aad u hesho emails dhabarka oo guji "Scan" si ay u eegaan emails lumay.
Tallaabada 3 Ladnaansho Email on Mac
Waxaas oo dhan xogta laga helay waxaa lagu soo bandhigi doonaa sida image hoose wuxuu muujinayaa sawirka kadib. Waxaad ku eegaan kartaa emails helay in lagu hubiyo sida badan mails waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano.
Markaas waxaad dooran kartaa in aad emails doonayay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad Mac.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo celiyo email ugu soo kabsaday dib ay goobta asalka ah.
PDF Recovery Mac: Sidee inuu ka soo kabsado PDF tirtiray on Mac
Mac External Hard Drive Guide Recovery
Tutorial ee Mac Memory Card Photo Recovery
Recuva Alternative for Mac
Full Guide on Mirroring Your Android in aad PC / Mac
Cabdo New Mail ee Mac Mail
Sida loo Beddelaan AAC in MP3 on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Top 4 Siyaabaha Bedelka iPhone Pictures in an Drive External Hard in Maverics
Movie Editor for Mac: Hel Best Movie Editor for Mac
Download CDBurnerXP u Mac ay gubaan DVD Saxannada (Mavericks oo ay taageerayaan)